Famokarana matihanina ny faritra ampidirina otrikaina misy kalitao azo antoka |
Famokarana matihanina amin'ny faritra ampiasain'ny fiara mandeha amin'ny kalitao azo antoka
Sombiny plastika mandeha amin'ny fiara, izany hoe kojakoja vita amin'ny plastika amin'ny fiara. Ny faritra plastika dia be mpampiasa amin'ny fiara. Anisan'izany, ny faritra amin'ny vatana sy ny faritra anatiny dia tena fahita, ary ny faritra anatiny no betsaka.
Sombin'ny tsindrona otomotif
anaran'ny vokatra:Sombin'ny tsindrona otomotif
dingana:Famolavolana tsindrona / fanodinana centrifugal / machining CNC
Tombony amin'ny faritra plastika mandeha amin'ny fiara
(1) Mavesatra maivana
Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny fitaovana automatique polymer dia ny lanjany maivana sy ny tanjaka avoakany. Satria ny salanisan'ny plastika isan-karazany dia 15-20% fotsiny amin'ny vy tsotra, dia maivana ihany koa noho ny hazo tsotra. Tombony manokana io fiasa io ho an'ny fiara lehibe ambony, izay afaka mampihena ny lanjany.
(2) Toetra ara-batana sy simika feno
Tombony iray hafa amin'ny fitaovana automatique polimerika ny fananany asa maro ary azo ampiasaina amin'ny fotoana manokana. Ny plastika dia manana fananana insulation tsara, fanoherana ny harafesina tsara, fanoherana fahanterana, fanoherana tsara ary fanoherana ny scrub, fahombiazana tsara tantera-drano ary toetra mekanika, fananana mamatotra tsara, ary voahodina ho karazany maro karazana. miasa.
(3) Vokatry ny haingon-trano tsara
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fitaovana automatique polymer dia ny vokatra haingon-trano tsara. Izy io dia azo zahana ho vokatra misy endrika be pitsiny sy loko maro miaraka amin'ny fotoana iray, ary indraindray dia mila atao pirinty, horonantsary, anaovana embossed, lamination ary miloko. Izy io dia voahodina ho sary, lamina ary lamina tena misy, izay afaka maka tahaka ny hazo voajanahary, vy, ny firafitry ny hoditry ny biby dia azo atao miloko, nalaina sary, nopetahany takela-bolafotsy, voaravaka, sns.
(4) Fahombiazan'ny fanodinana tsara
Noho ny plastika entin'ny polymer material sy ny mifanentana tsara amin'ny fitaovana hafa, azo ampiasaina ny fitaovana samihafa, miaraka amin'ny fanampian'ny milina fanodinana maoderina isan-karazany, amin'ny alàlan'ny fitrandrahana, famolavolana tsindrona, fanoratana, famolavolana, famolavolana fikolokoloana Azo ahodina ho fiara polymer fitaovana misy endrika samy hafa, fananana samihafa, loko samihafa, ary fiasa samy hafa amin'ny fomba hafa, toy ny fitrandrahana mivantana ho amin'ny fantsona, mombamomba, takelaka, tsindrona amina vokatra misy endrika maro, fanaovana sary mihetsika, sns. Azo atao loko miloko ihany koa izy io , interlayers, hollows, inserts ary vokatra hafa mifanaraka amin'ny filàna. Izy io koa dia azo zahana ambaratonga faharoa arakaraka ny takiana, toy ny fihodinana, ny fikapohana, ny fanapahana, ny famafazana ary ny famafana ny vokatra mekanika. , Tsofa mangatsiaka, fitambarana sns.Fahaizana manome: Jereo ny volan'ny fividianana
Previous: Manokana amin'ny famokarana slider nylon crane manana traikefa manankarena
Sombin-tsolika tsindrona otomotif
Sombin-tsolika famolavolana tsindrona